China H Beam Steel Structure Shot Blasting Machine Manufacture and Factory | Ding Tai
Igwe na-agbawa ọkụ H-beam, bụ nke igwe na-agbawa agbawa ụdị rola, nke a na-ejikarị na-ewu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.A na-eji ya kpochapụ nrụgide na nchacha elu nke ihe owuwu ígwè nwere nnukwu ígwè na ígwè H.
Igwe na-agbapụta ihe nrụnye igwe Q69 maka nhicha efere
Ahịrị Nchekwa Plate 1.Steel:
Anyị nwere ike chepụta na rụpụta dị iche iche size nke ígwè efere pretreatment akara dị ka ndị ahịa 'chọrọ.Biko ziga ajụjụ nkọwa gị na email anyị.
A na-emepụta ma na-emepụta ụdị efere ígwè efere akpaaka na-agba ọkụ na mkpuchi site na ịnakwere uru nke ngwaahịa ndị yiri ya site na ma n'ime obodo ma ná mba ọzọ.The nchara ihicha akụkụ (shot gbawara ihicha) adopts elu-oru oma gbawara wheel na full shutter ụdị ogbugba ájá separator.Igwe na-ehicha ihe na-eji brush naịlọn siri ike mee nke ọma na ikuku ikuku dị elu.Akụkụ preheating na ihicha nwere ike ịnakwere ụzọ kpo oku dị iche iche.Akụkụ agba agba na-anabata usoro ịgbasa ikuku na-enweghị ikuku.Ngwa zuru oke nke PLC na-achịkwa, ma bụrụ nnukwu akụrụngwa zuru oke nke mba ụwa dị elu.
Nke a na-agbawa agbawa igwe na eserese akara bụ tumadi ji n'elu ọgwụgwọ (ya bụ preheating, nchara mwepụ, agba spraying na ihicha) nke ígwè efere na dị iche iche structural ngalaba, nakwa dị ka ihicha na ike nke metal structural akụkụ.
A na-eji igwe a eme ihe n'ọtụtụ ebe na Shipyard, ụlọ ọrụ mmepụta ụgbọ mmiri, ụlọ ọrụ igwe, wdg.
Ụdị na nkọwapụta nke ahịrị ihicha ihe nchara nchara nchara:
2. Ọrụ anyị:
Kedu ọrụ Antai nwere ike ịnye?
1. Ndị injinia anyị nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche dịka ihe achọrọ maka ndị ahịa nke akụrụngwa.ma zipụ nkwenye ndị ahịa iji nyere ndị ahịa aka ịchekwa ego.
2. N'oge a na-emepụta ngwá ọrụ, anyị na-ese foto ọganihu mmepụta ngwaahịa, ma zigara onye ahịa ka ọ soro ọganihu ahụ.
3. Ajị ngwongwo na-aga, anyị ga-ezipụ akwụkwọ mbụ maka onye ahịa (dị ka ndepụta nkwakọ ngwaahịa, ụgwọ, CO, Ụdị E, Ụdị A, Ụdị F, Ụdị M, B / L wdg).
4. Anyị nwere ike inye ndị ahịa ihe osise ntọala English n'efu, eserese nrụnye, akwụkwọ ntuziaka, ntuziaka nlekọta na eserese akụkụ.
5. Anyị nwere ike izipu ndị injinia anyị ka ha tinye na debugging na mba ofesi, na ọzụzụ n'efu nke ndị ọrụ na ndị ọrụ na-arụ ọrụ.
6. Anyị nwere usoro usoro ọrụ mgbe-ahịa, A ga-ezigara onye ahịa ọ bụla ID ID, ha nwere ike ịbanye na usoro a na-elele ozi niile ịzụta akụrụngwa na akụkụ ya.Anyị na-enye ndụmọdụ ịntanetị awa 24.
1. Ụbọchị ole ka ị chọrọ iji mepụta igwe a?
Nke a bụ igwe emebere nke ọma dịka ihe achọrọ gị siri dị.Site na imepụta injinia ruo mmecha mmepụta, ọ chọrọ ihe dị ka ụbọchị 45-50.
2. Kedu ihe ụlọ ọrụ gị na-eme gbasara njikwa mma?
Anyị na-akwụ ụgwọ dị ukwuu karịa njikwa mma site na mmalite ruo na njedebe nke mmepụta.A ga-achịkọta igwe ọ bụla ma nwalee nke ọma tupu ebupu ya.
3. Kedu ihe bụ nkwa ịdị mma igwe gị?
Oge nkwa dị mma bụ otu afọ, anyị na-ahọrọ akụrụngwa ama ama n'ụwa iji dobe igwe anyị n'ọnọdụ ọrụ zuru oke.
4. Ị nwere ike ịnye ntinye na ntinye ọrụ na mba ofesi?Ogologo oge ole ka ọ na-ewe?
EE, anyị na-enye ọrụ esenidụt, mana ndị ahịa kwesịrị ịkwụ ụgwọ maka ndị injinia ụgbọ elu na nri ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Obere igwe na-ewekarị ụbọchị ise.
Nnukwu igwe na-ewekarị ihe dị ka ụbọchị iri abụọ.
5. Kedu ka m ga-esi tụkwasị obi na ị ga-ebuga igwe ziri ezi dịka m nyere iwu?
Anyị ga-ebunye ezigbo igwe dị mma dịka anyị tụlere ma kwenye n'usoro.Isi nke omenala ụlọ ọrụ anyị bụ ihe ọhụrụ, àgwà, iguzosi ike n'ezi ihe na arụmọrụ.Antai bụ onye na-ebubata ọla edo nke ALIBABA nwere nyocha BV & TUV.Ị nwere ike ịlele ALIBABA, anyị enwetabeghị mkpesa ọ bụla n'aka ndị ahịa anyị.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, PLS lelee ụlọ ọrụ anyị.
Nke gara aga: Igwe ọkụ na-agbawa ọkụ dị elu
Osote: Igwe na-agbawa aja nke Cabinet
Q69 Site na ụdị Shot gbawara igwe maka Alum ...
Site n'ụdị igwe ịgbawa agbawa maka Strenthe...
Q69 Series Steel Plate na Profaịlụ ngalaba Stee...
Na-akpaghị aka Ahorizontal H Beam ajari Wepu Sh...
Igwe na-ebufe ụdị mkpọ ọkụ maka ...
Plate Nchọpụta fotoelectric na ngalaba...
Nko abụọ Abrator, Hook Polisher Abrator, Igwe na-agbapụta eriri roba ụdị agba, abrator, Igwe na-agba ọkụ roba Belt, Site na igwe na-agbawa nri ọkụ, Ngwaahịa niile